Inhloko zeNdaba Ncwabakazi 05, 2019
****** Uzulu uveza ukukhathazeka okukhulu ngokukhwezwa komthelo wokusebenzisa imigwaqo kumaToll gate elandelwe yikukhwezwa njalo kwentengo yamafutha ezimota esithi lokhu sekubangele ukukhuphulwa kwemali zokugada amabhasi lemitshova iqonge kabi.
********** Abantu bapha imibono yabo ngempumela yophenyo lokukhangela ukusetshenziswa kwemali kahulumende langokutshaphazwa kwesikhwama sepension eseNSSA.
********** Abebandla leMthwakazi Republic Party- MRP balobele uMongameli Emmerson Mnangagwa incwadi lamhlanje besola ukubotshwa kwamalunga abo amathathu becalwa ngokubangela udlakela ngelanga lomhlangano wekhomishini kaKgalema Montlante.
************ Kwezemidlalo……… Umqeqetshi weqembu elimela iZimbabwe emdlalweni we Rugby, uBrendan Dawson uthi ukudlalisa abadlali abasakhulayo kuphathise kakhulu leliqembu lona ese linqobe emidlalweni emithathu eseliyidlale kumncintiswano weVictoria Cup.
********** KuLiveTalk namhlanje sikhangela ukukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimotha osokubangele ukukwezwa kwembadalo yokugada imitshova lamabhasi kanye leyempahla lokudla elizweni lonke. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani imlayezelo kunombolo ezithi 0012024650318. Lingakhuthwa yilezindaba lezinye kuStudio 7 ngo half past 7 ntambama lango half past 6 ekuseni, kumagagasi athi 909 am, 4930, 15580 laku 6080 kilohertz kuShortwave.